FIIRSO Sawirrada: Xildhibaan Soomaaliyeed oo arrimo muhiima kala hadlay jaaliyadda Turkiga
Home » WARARKA MAANTA » FIIRSO Sawirrada: Xildhibaan Soomaaliyeed oo arrimo muhiima kala hadlay jaaliyadda Turkiga	FIIRSO Sawirrada: Xildhibaan Soomaaliyeed oo arrimo muhiima kala hadlay jaaliyadda Turkiga
19/03/2017	575 Views Xildhibaaan Ilyaas Cali Xasan, oo ka mid ah mudanayaasha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Fedaraalka Soomaaliya, ayaa kulan la qaatay Soomaalida ku nool dalkaTurkiga, kuwaas oo u badan arday wax ka barta Jamacadaha dalkaas.
Xildhibaanka ayaa waxa uu ka qeybgalayaasha kulanka ugaga warramay arrimo ku saabsan xaaladda dalka; gaar ahaan nabadgeliyada, isbeddelka siyaasadda, iyo abaaraha ba’an ee dad iyo duunyaba saameeyay.
Ka-qeybgalayaasha kulanka aya waxa ay xildhibaanka weyddiiyeen su’aalo ku saabsan arrimaha uu uga warbixiyay ee quseeya xaaladaha dalka. Waxaana ay sidaas oo kale qaar ka mid ah ardayda iyo dadkii kale ee kulanka ka qeybgalay xildhibaanka la wadaageen talooyin ay ugu sii dhiibayeen madaxda sare ee dalka.
Kulanka ka dib, waxa uu xildhibaan Ilyaas ka mahadnaqay so0-dhawaynta loogu sameeyay Turkiga, isaga oo kulamada uu dadka Soomaaliyeed ee halkaas jooga la qaatay ku sheegay fursado muhiim ah, oo uu ku dhegeystay dareenka dadka.
Geesta kale, waxa uu xildhibaan Ilyaas la kulmay qaar ka mid ah saraakiisha, iyo askarta ciidamada xoogga ee tababbarka u jooga Turkiga, isaga oo u jeediyay hadallo uu ku dhiirrigelinayo, kuna boogaadinayo in ay ka guul-gaaraan howlaha loo soo diray.
Previous: Buntilan oo soo bandhigtay guul muhiima oo ay gaartay (Fiirso)
Next: Ra’isul-wasaare Kheyrre oo soo-jeedin muhiima u diray Galmudug